Industrial Kuramba chinyorwa Tire Pyrolysis Equipment - China NIutech Environment
Industrial Kuramba chinyorwa Tire Pyrolysis Equipment
Chinyorwa Tire Pyrolysis midziyo Production Process
The chinyorwa Tire anobvarurwa-bvarurwa kupinda zvakakodzera tai chips kuramba kuti zvokudya kupinda reactor nokuda chakaipa kumanikidzwa yakaderera tembiricha pyrolysis pamwe yakaderera tembiricha sarufa kuchinjirwa tiwedzere kuburikidza inopisa chisimbiso mudziyo.
The gasi pyrolyst mafuta ari kukava mafuta mafuta uye zvishoma combustible gasi (kierrätys kushandiswa mushure kukwesha) pashure fractionation uye kutonhora kuburikidza mafuta separator.
Yakasimba goho yakatsvuka kabhoni dema uye simbi vachaparadzaniswa nokuda rinobva separator. The mbishi kabhoni dema chichaitwa rwoga hwakatamisirwa kabhoni dema kugadzirwa maitiro uye mumaindasitiri mugwaro kabhoni dema kuchaita kuwanikwa pashure kwakakomba pamusoro pezvakaitwa akafanana azvikuya etc. kana achawana dzimwe mhando mukuru-ukoshi makemikari acho. The vakaparadzana simbi aigona kutengeswa sezvo chinyorwa simbi.
The combustible gasi richashandiswa huni zvachose negadziriro pashure kukwesha rikurumidze. The kudziyisa Hurongwa adopts residual kupisa marara michina, izvo kure rinoponesa simba zvinodyiwa uye pasi pasi nokumhanya mutengo. The gasi zvinoberekwa dzaFord kuchaita acheneswe kundosangana nezvakatipoteredza mureza ipapo pauri.
Production mutsetse hurongwa
Tire shredding maitiro (optional)
Constant tembiricha kudziyisa hurongwa
Chinogara chichingoitwa pyrolysis hurongwa
Carbon dema kugadzirwa hurongwa (optional)
Combustible gasi kukwesha hurongwa
Gas yokuzvinatsa hurongwa
Oil DISTILLATION maitiro (optional)
Industrial chinoenderera, hombe throughput, kuwedzera kurapwa kushanda zvakanaka uye kugadzirwa kugona.
Exclusive pasi tembiricha pyrolysis michina, pasi rakawanda, kuwedzera mafuta goho uye quality, nechokwadi yakareba, chinoenderera uye rakadzikama nokushanda kugadzirwa, zvinoshamisa vawedzere midziyo * lifespan.
Exclusive Anti cocking, chafariz Kuparadzirwa michina, dzinoita zvinhu zvakafanana nenharo uye? Pyrolized zvachose, kuti kubudirira yepamusoro chigadzirwa.
Chete inopisa chisimbiso zvigadzirwa, nechokwadi nokushanda ngozi uye hwakavimbika.
Exclusive gasi yokunatswa uye kuramba kupisa marara Utilisation michina, ndokunatsawo gasi inogona kushandiswa kudziyisa hurongwa sezvo combustible gasi, vasara kupisa inogona dully kushandiswa, vakaona kuzvidzora anopa pyrolysis maitiro pasina mamwe kudziyisa bhuku, zvinoshamisa kuderedza achimhanya mutengo.
Pedza gasi okuwana mutsetse akaedzwa, zvose anobuda parameter kusangana nezvaidiwa EU EEA pamusoro EU uye US EPA.
Yose dzaFord dzinotevedzera PLC akangwara kuzvidzora, yambiro, aramu uye car-kururamiswa basa, inishuwarenzi kushanda pasi vakachengeteka ezvinhu.
Low chinodiwa kuti manpower, Low vanoshanda zvakanyanya uye yakachena kugadzirwa.
Previous: Oil DISTILLATION gadziriro Best High-Quanlity Products
Next: tsvina epurasitiki marara inoraswa Best High-Quanlity Cheap Products
A: Kana munhu 10,000T / Y mutsetse, wekishopu kuti pyrolysis chikamu ndiko 48m * 20M * 9m, riri dzakakudzingai tai (kana mupurasitiki) shredding uye vakaipedza zvinogadzirwa kurapwa okudhindira
A: Kana munhu 10,000T / Y mutsetse, inoda inenge 5-6 mwedzi
A: Nokuti Europe tiri yakakwana kupa onsite chokugadza Tendeukai-Key Project; nokuti dzimwe nyika uye nzvimbo kunze Europe, tinogona kupa cherechedzo yokugadza, basa uye basa kudzidzisa basa.
A: Hongu, tinogona kupa yaivapo mutengi * S chirimwa wako nzvimbo kushanya.
A: The mafuta Specification zvinoberekwa edu kuramba pyrolysis dzaFord iri maererano SH / T0356-1996 No 4 Light Fuel Oil. The dzikabereka mafuta ane mukuru kupisa rinokosha uye pasi nesarufa kugutsikana, aigona kushandiswa pomoto, jenareta uye yakatsvuka mafuta DISTILLATION etc. The mafuta pashure DISTILLATION muitiro aigona kuiswa nokuti guru simba-pasi nokukurumidza Diesel injini, engineering okurima motokari / marina injiniya uye ose emagetsi.
Nokuti kushanda Carbon Black, tapota nesu kuwana mamwe mashoko
chinyorwa tired pyrolysis kwetsvina
tsvina tired pyrolysis chirimwa
tsvina tired pyrolysis kwetsvina
tsvina tired pyrolysis Machine
Kuramba chinyorwa Tire Pyrolysis System
High Profit Waste Tire Recycling Plant
Hot Nokutengesa Oil Pyrolysis nokunatswa Machine
Pyrolysis Kuzvigadzira Patsva Company
Chinyorwa Tire Pyrolysis System
chinyorwa Tire Recycling Machine
chinyorwa Tire Pyrolysis Machinery
Tech Waste Tire Recycling Plant
Tire Pyrolysis Oil Plant
Tire Recycling Machines To Oil
Tire Recycling Plant Kuti mafuta Mafuta
Dongo Plastic yokunatsira To Fuel Oil
Waste chinyorwa Plastic Tire Pyrolysis
Tsvina Tire Kuzvigadzira Patsva To Fuel Oil
Waste Tire Recycling To mafuta Oil Machine
Tsvina Tire Recycling Machine To Oil
Waste Tire achinatsa To Fuel Oil
Waste Tire To Diesel Plant
Waste Tires To Fuel Kuzvigadzira Patsva
Latest Technology pamusoro Industrial chichingoitwa Wakanga ...
High Oil Output runoramba Waste Tire kuti Fuel O ...
Chinyorwa Tire Pyrolysis pamwe Zvirokwazvo Industrial Cont ...